Ihe ụlọ 5 nke na -abụkarị ndị na -adịghị ọcha | Bezzia
Ihe ụlọ 5 nke na -adịkarị ọcha
Nke Torres | 23/10/2021 16:00 | Home
Nhicha ụlọ na -abụ ihe a na -eme mgbe niile na ihe eji arụ ọrụ, ngwaọrụ iji mee ka ọrụ a dị ngwa ma nwekwuo ọ. Agbanyeghị, nhicha a na -adịkarị elu elu iji mee ka ụlọ dị mma yana ịdị ọcha. Nke pụtara na site n'oge ruo n'oge ịkwesịrị ime nhicha miri emi iji wepu unyi site n'akụkụ na ebe nwere ohere siri ike.
N'ime usoro nhicha a, a na-enwekarị ihe ndị na-adịghị ọcha. Ihe jupụtara na nje na nje bacteria nwere ike ịdị ize ndụ nye ahụ ike. Mana a na -ahụ ha maka na a naghị ele ha anya dị ka nhicha ụlọ, ma ọ bụ ekwenyere na ọ dịghị mkpa iwepụta oge na -ehicha ha. Ka nke a ghara ime gị (ọ bụrụ na ọ dị) anyị na-agwa gị ihe ụfọdụ n'ime ihe ndị a bụ.
1 Ihe ndị ezinaụlọ na -adịghị ọcha
1.1 Ọnụ ụzọ
1.2 Mposi mposi
1.3 Ngwa nhicha
1.4 N'ime igwe ịsa ahụ
Ihe ndị ezinaụlọ na -adịghị ọcha
Ala, uzuzu na arịa ụlọ na ọbụlagodi akwa dịka kapeeti, bụ mpaghara ụlọ kacha enweta nhicha kachasị, n'ihi na a na -ahụ ha nke ọma ma na -ahụkarị nsị. Mana n'ụlọ ọ bụla enwere ọtụtụ ihe na-agafe, ndị a na-adịghị ehicha mgbe nile na ndị na-akwakọba unyi nke ụdị nile. Ị chọrọ ịchọpụta ma ụlọ gị ọ dị ọcha ma gbuo ya? Ozugbo anyị ga -agwa gị ihe bụ ihe ndị ahụ dị n'ụlọ ahụ adịghị ọcha.
Ọ bụ ezie na ọnụ ụzọ buru ibu, na -ahụ anya ma na -ehicha ya mgbe niile, ị naghị ama mgbe niile ebe ọtụtụ nje bacteria na -agbakọba. Isi ọnụ ụzọ dị na nke a bụ nnukwu akpa nje bacteria n'ime ụlọ nke a ga -emerịrị ka a na -ehichapụ ya ọtụtụ oge na nke a na -elegharakarị anya. N'agbanyeghị na ọ bụ ọrụ dị mfe, ọtụtụ mmadụ na -echefu ya. Ma ọnụ ụzọ na-emetụ ibe gị aka mgbe niile na ọtụtụ oge na aka ruru unyi. Maka nke a, ọ dị ezigbo mkpa ka a na -ehicha ha mgbe niile.
Ọ nwere ihe dị n'ụlọ nke nwere ike inwe ọtụtụ nje bacteria? Ahịhịa ụlọ mposi nwere ihe a kapịrị ọnụ, nke doro anya na ọ dịghị mkpa ịkọwapụta ya. Ihe yiri ka ọ na -agbapụ nye ọtụtụ ndị bụ mkpa ya na-ekpochapụ ihe a mgbe niile. Ihe dị mfe dị ka ijuputa akpa ebe a na-etinye ahịhịa na mmiri ma ọ bụ otu ngwaahịa ahụ ị na-eji ihicha ụlọ ịsa ahụ.
Mgbe ị mechara ihicha ụlọ gị, ọ na -adị ka ihe na -egbu maramara, yana isi dị ọcha nke na -enye gị afọ ojuju dị ukwuu. Agbanyeghị, a na -ehicha ya kpamkpam? Ihe ejighị anya nkịtị hụ mana nke ahụ nwere ike ime ma ọ bụrụ na i chebaraghị nkọwa ụfọdụ echiche. Ngwa nhicha na-akwakọba nnukwu nje bacteria mgbe ejiri nke ọ bụla. Ọ bụrụ na ehichaghị ha ma gbuo ha tupu nchekwa, Mgbe ọ bụla ị na-eji ha, ị ga na-agbasasị ihe niile n'ime ụlọ gị ndị ọzọ.
N'ime igwe ịsa ahụ
Ngwa dị mkpa maka nhicha dịka igwe ịsa ahụ, enweghị ike iji ya rụọ ọrụ nke ọma ma ọ bụrụ na adịghị ọcha nke ọma. Na roba nke igwe ịsa ahụ, na drum na akụkụ ọ bụla dị n'ime nke ihe a, ihe ndị fọdụrụ na uwe, detergent, mmiri na ụdị nje bacteria niile na -agbasa n'ime. Ihe ndị a niile na -emetụta uwe ndị ahụ mgbe a na -asacha ha ma na -ebufe ya na nke ọ bụla. Hichaa ime igwe mgbe niile ị ga -edobe ngwa a n'ọnọdụ zuru oke.
Nnukwu unyi na nje bacteria na-agbakọba na ahụigodo na òké kọmputa kwa ụbọchị. Dị ka ọ na -adịkarị, ebe ọ bụ na a na -eji aka emegharị ya, ha anaghị adị ọcha mgbe niile. Na mgbakwunye, mgbe ị nọrọ obere oge na kọmpụta, ị ga -ebili maka kọfị, tinye aka gị n'ihu gị, ọbụlagodi n'ọnụ gị. Ya bụ, ị na-ebufe ụdị nje bacteria niile n'ahụ gị. Hichaa kọmputa gị kwa ụbọchị, ọ bụ mmegharị ahụ dị mfe na ngwa ngwa agaghị ewe gị ihe karịrị otu nkeji.
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị dị n'ụlọ a na -ahapụkarị adịghị ọcha, n'agbanyeghị na enwere ọtụtụ ndị ọzọ ekwentị mkpanaaka, njikwa anya, okpokoro ụzọ,. Na gị, ị nwere ike iche maka ihe ọ bụla ọzọ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Home » Ihe ụlọ 5 nke na -adịkarị ọcha
Omume 3 iji luso ogwe aka na -akụda n'ụlọ
Zere nsogbu ọhụụ mgbe ị na-arụ ọrụ telefon